Sigxile ekulweni nokuntuleka kwemisebenzi entsheni iSabelomali saKwaZulu-Natali. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Lezi ngezinye zezibalo ezikhathaza uNgqongqoshe weZimali KwaZulu-Natali uNkk uNomusa Dube-Ncube, nezenze wethembisa ukulwa nesibalo esiphezulu sentsha engasebenzi esifundazweni ngenkathi ethula iSabelomali izolo.
“Ngalesi Sabelomali uhulumeni uzobeka eqhulwini ukuphuthumisa izinhlelo zengqalasizinda yezemfundo nokuqinisa izinhlelo zokucija amakhono ukuze sifeze umgomo wethu wokuthi intsha nabantu besifundazwe bakwazi ukuzimela nokuziphilisa ngamakhono abo,” kusho yena.
UNgqongqoshe uthe ukugxila ekucijeni amakhono entsha yesifundazwe yikona okuzokhulisa umnotho wesifundazwe, kwenze abantu bakwazi ukuncintisana namazwe omhlaba. Uthe iKZN isesimweni esihle sokukwazi ukuzuza lukhulu ngobuchwepheshe besimanje i-4th Industrial Revolution.
“Ikusasa lilele emishinini yobuchwepheshe besimanje engadingi abantu ukuze isebenze, ngakho ngenxa yazo zonke izinselelo ezikhona zobuchwepheshe, sizimisele ngokuqinisekisa ukuthi abantu abasha esifundazweni sonke benza umehluko futhi bayesekwa ukuze bakhe ikusasa lezifiso zabo,” kusho ungqongqoshe.
UNkk uDube-Ncube uthe iKZN izoqhubeka nokutshala imali ezinhlelweni zokuthuthukisa ingqalasizinda yesifundazwe. Eminyakeni emithathu ezayo iwuR56.3 billion imali ezosetshenziswa ukuthuthukisa ingqalasizinda yesifundazwe.
Wenza lesi simemezelo nje ungqongqoshe, kuleli sonto inhlangano elawula ezokusakaza nokuxhumana i-Independent Communications Authority of South Africa iqale uhlelo lokudayisa i-spectrum njengoba inxuse abafisa ukusithenga ukuthi bathumele izicelo zabo. Loku kuzokwenza ukuthi izinkampani ezihlinzeka ngomoya wokudonsa i-internet zidayise umoya ozodonda ngokushesha kakhulu futhi kubhekwe ukuthi kwehlise namanani e-data, okumanje amba eqolo.
UmNyango wezokuThutha uzosebenzisa uR25.9bn ngonyaka kwingqalasizinda eminyakeni emithathu ezayo, owezeMpilo uhlela ukusebenzisa uR6.7bn, owezeMfundo uzosebenzisa uR9.1bn kuthi owezokuHlalisa aBantu usebenzise uR11.3bn.
Ungqongqoshe wethule izibonelelo ezinombandela zokwengeza ekulekeleleni ukuthuthukisa isifundazwe. Phakathi kwalezo zibonelelo wuR99.8 million ozohlukaniselwa iminyangweni emihlanu. Kukhona noR11.9m wokwakha amathuba emisebenzi eminyangweni kahulumeni eyisishiyagalolunye.
Isabelo sokuthuthukisa umNyango wokuHlalisa abaNtu sizonyuka ngoR992m eminyakeni emithathu, kuthi eminyakeni emibili yokuqala izobhekelela ukulungisa izindawo ezidinga ukulungiswa.
Ebhekelele izinsizakusebenza zezempilo inyuke ngoR42.8m ngo-2022/23 yaba wuR1.4bn, kwathi eyokuthuthukisa ezemidlalo yanyuka ngoR31.9m eminyakeni emithathu ezayo.
Eyokulungisa imigwaqo izonyuka ngoR1.8bn eminyakeni emithathu ezayo.
Eyokudla kwezikole yenyuka ngoR59.5m ngo-2022/23, nokuzosho ukuthi izofinyelela kuR2bn, kanti izophinde inyuke ngoR88.4m ngo-2024/25. Eyezinhlelo zezempilo ezifundeni izonyuka ngoR270.1m ngo-2022/23. Eyengqalasizinda yezemfundo izonyuka ngoR676.9m eminyakeni emithathu ezayo.
Isiyonke imali eyabelwe u-2022/23 inguR140.3 billion.
Ukwabiwa kweSabelomali ngo-2022/23 eKZN:
Imininingwane icashunwe kwiSabelomali saseKZN sango-2022/23